The Gardener: 2011-09-04
ဒို့ကတော့ မတူ မတူ မတူ ……….။။
No wonder, We are men !!!!!!!
ယောကျာ်းတွေဟာ တစ်ခုမဟုတ်တစ်ခုရူးတာပဲ။ သူတို့တွေရဲ့ဝါသနာကလည်း တကယ့်ကို ဘာမှန်းမသိတာတွေ။ ယောကျာ်းတွေက ၀ါသနာမပါတာမှာ ပိုက်ဆံမသုံးဘူး။ ၀ါသနာပါတာဆိုရင်လည်း ဈေးကိုမကြည့်ဘူး။ ၀ါသနာတောင်မှ တစ်ချို့ဆို အမျိုးနှစ်ဆယ်လောက်ရှိတယ်။ အဆင့်ဆင့်ထားတာ။ အဲဒါကို /Zနီးသယ်/ လည်း အခုတော့ သဘောပေါက်စပြုလာပါပြီ။ ယောကျာ်းတွေရဲ့အကျင့်က တစ်ယောက်တည်း ၀ါသနာပါနေရရုံနဲ့ကျေနပ်တာမဟုတ်ဘူး။ ၀ါသနာမပါဘူးလို့ ဘယ်လောက်ပြောထားပြောထား နည်းနည်းတော့ ရှင်းပြသေးတယ်။
For God’s sake, there is no such shopping centre in s’pore.
ဘယ်လောက်ပဲ နားလည်ပေးပါတယ်ဆိုတဲ့ယောကျာ်းပဲ ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမတွေ ဖိနပ်ကို ဘာလို့ရွေးတယ်ဆိုတာကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ (နားလည်တယ်ဆိုတဲ့ သူတွေကိုလည်း ရနံ့သစ်မှာဖြစ်ဖြစ် လက်ဖက်ရည် ခေါ်တိုက်ချင်ပါသေးတယ်။) ဖိနပ်ဆိုင်သွားရင် ယောကျာ်းတွေက ဝယ်ဖို့သွားပြီး မိန်းမတွေက ဟိုရောက်မှ စရှာတာ။ တကယ်လို့ အထပ် ၂၂ ထပ်ရှိပြီး ဒီဇိုင်းမျိုးစုံရှိတဲ့ ဖိနပ်ဆိုင်ကြီးတစ်ခုလောက်ရှိမယ်ဆိုရင် မိန်းမတွေ အစာအိမ်ရောဂါဖြစ်ဖို့ရှိတယ်။ ဒါမှမဟုတ် စားရင်းသောက်ရင်းများ လိုက်စီးကြည့်နေမလားမသိဘူး။ ဝ
We spend more times in cool places :P
ယောက်ျားတွေက ဒီလို ကိစ္စတွေမှာ အချိန်များများမသုံးနိုင်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ သူတို့မှာ တခြားပိုအရေးကြီးတဲ့ဝါသနာတွေရှိသေးတယ်။ အချိန်ကို တစ်နေရာတည်း များများသုံးလိုက်လို့မရဘူး။ စာအုပ်ဆိုင်ရောက်ရင် ခဏဆိုပြီး နှစ်နာရီလောက် ပတ်နေတာတေို့ ဝယ်ခါနီး စာအုပ်ငါးအုပ်လောက်ကို ဖတ်ကြည့်နေရတာတို့၊ ပရိုမိုးရှင်းပေးရင် ဘယ်စာအုပ်ကို ယူမလဲ ကြိုကြည့်ထားရတာတို့ကိုကြတော့ အမျိုးသမီးတွေ နားလည်ဖို့ သိပ်မလွယ်ဘူး။
စီဒီဆိုင်ရောက်ရင်ပိုတောင်ဆိုးသေး။ တစ်ချပ်လုံးနီးပါးနားထောင်ပြီးမှ မကြိုက်ဘူးဆိုပြီး ပြန်လာတာတို့၊ ဈေးချနေတာတွေ့လို့ သိပ်မကြိုက်လှတဲ့ အဆိုတော် အခွေဝယ်လာတာတွေဘာတွေ ယောကျာ်းချင်းပဲနားလည်တယ်။
We are helpless forawhile in married life.
ယောကျာ်းတွေကို နားလည်ဖို့ကြိုးစားရတာလည်း လွယ်မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ဘာသာသူတို့တောင် တစ်နေ့တစ်မျိုးလောက်ဖြစ်နေလို့ နားမလည်နိုင်ဖြစ်နေတာ။ အထူးသဖြင့် အိမ်ထောင်ကျသွားတဲ့အခါမှာ နောက်တွဲဖြုတ်ချလိုက်တဲ့ ဒုံးကျည်လို အရှိန်နဲ့တက်သွားပြီး ဘယ်ကိုသွားနေတာလည်းမသိသလိုဖြစ်ဖြစ်သွားတဲ့ အချိန်တွေမှာ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်လည်း နားလည်ရခက်တယ်။ နောက်တော့ ကမ္ဘာ့ဆွဲအားနဲ့လွတ်နေသလို ချာလည်ချာလည်နဲ့ မြေဆွဲအားကင်းမဲ့ဇုန်မှာ အသားကျဖို့ကြိုးစားရသေးတယ်။ အင်နာရှားတွေချော်နေတာ။
She has gotaruler and I am the gas. Please don’t measure me, honey.
ပိုဆိုးတာက ကျွန်တော့်မိန်းမက သူနဲ့သိတဲ့ သူ့အဖေက သိပ်ကို စည်းကမ်းရှိ၊ သိပ်ကို တိကျ၊ သိပ်ကို နားလည်တတ်သူဖြစ်ပြီး၊ သူ့ယောကျာ်းကတော့ ဘာမဆို အဆင်ပြေသလိုလေးပဲနေတယ်။ အချိန်ကတော့ တက်တက်စင်အောင်လွဲပြီး၊ နားလည်မှုကလည်း တကယ့်ကို လုံးဝပါပဲ။ ခေတ်မတူတော့တာလည်းပါမယ်ထင်တယ်။ သူ့ရဲ့ expectation နဲ့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တိကျမှုနဲ့ကတော့ တော်တော်လေးဝေးပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက စည်းကမ်းတွေ သိပ်များနေရင် creativity ကျတယ်လို့ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ်ခံယူထားပါသေးတယ်။ ယောကျာ်းတွေရဲ့ထူးခြားချက်က သူ့ဆင်ခြေကို သူ့ဘာသူ လုံး ဝဥဿုံပစ်ပျက်ယုံလိုက်တာပဲ။
မနက်ဆိုရင် သူက ၇ နာရီ လောက်ဆိုနိုးပြီ။ ကျွန်တော်ကတော့ Quench ကြော်ငြာထဲကလို တစ်စက်ကျန်သည်အထိ အရသာရှိစေရမယ်ဆိုတာကိုအားကျလို့ တစ်စက္ကန့်ကျန်သည်အထိ အိပ်နေတတ်တယ်။ ၈ နာရီမှာ ထ တာတောင် ၈ နာရီထိုးဖို့ နှစ်မိနစ်လိုသေးရင် အဲဒိနှစ်မိနစ်ကို ပြန်အိပ်နေတယ်။ အဲဒီနေရာမှာတော့ ယောက္ခထီးကြီးထက် တိကျတယ်။
The Early worm is caught by too late bird.
ညဆိုရင်တော့ သူ့ရဲ့ Limit က ၁၁ နာရီပဲ။ အဲဒီလောက်ဆို အိပ်ကိုအိပ်မှ။ မအိပ်ရင် ကောင်းကောင်း အိပ်မပျော်တော့ဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ ၁၁ နာရီလောက်မှ စပြီးစာဖတ်တယ်။ စာရေးတယ်။ Anime ကြည့်တယ်။ review ဖတ်တယ်။ သိပ်ကို ကြိုက်တဲ့ wiki ဖတ်တယ်။ သတင်းစာဖတ်တယ်။ Computer အကြောင်း တစ်နာရီလောက်ဖတ်တယ်။ program ရေးစရာလိုတာတွေပါရင် စမ်းပြီးရေးတယ်။ ကဗျာတွေဘာတွေရေးတဲ့နေ့ဆို ပိုဆိုးတယ်။ အခုတလော ကဗျာရေးရင် အသံသွင်းကြည့်သေးတယ်။ ပြန်နားထောင်ပြီးမှ မကြိုက်တာတွေပြင်တယ်။ သွားရင်းလာရင်း ကဗျာရွတ်ထားတာ ပြန်နားထောင်ရတာကိုလည်း ကြိုက်တယ်။ မိန်းမကတော့ ကဗျာရွတ်နေရင် လာလာစတတ်လို့ သူ့ရှေ့မှာ ရွတ်ရတာ အခက်အခဲရှိတယ်။ နောက်ဆုံးရေးထားတဲ့တစ်ပုဒ်ဆို ရွတ်ရတာတာင် ငါးမိနစ်နဲ့ ငါးဆယ့်ငါးစက္ကန့်ကြာတယ်။ မာရသွန်ကဗျာလောက်ဖြစ်နေပြီ။ အဲဒါကို နားထောင်တယ်။ပြင်ရေးတယ်။ မကြိုက်ရင် draft ထဲမှာသိမ်းတယ်။
Bored? Why? I love to watch it again.
video ဆိုလည်း ကြည့်ပြီးသားကားတွေကို ပြန်ပြန်ကြည့်ဖြစ်တယ်။ ပထမတစ်ခေါက် ဇာတ်ကောင်တစ်ကောင်ကို သဘောကျပေမယ့်၊ နောက်တစ်ခါ တစ်ခြားဇာတ်ကောင်ကို သဘောကျတာမျိုးတွေလည်းရှိတယ်။ Angels and Demons ဆိုရင် လေးခေါက်လောက်ကြည့်ပြီးပြီ။ စာအုပ်တော့မဖတ်ရသေးဘူး။ စာအုပ်ဆိုရင်တော့ ပိုပြီး စုံစုံလင်လင်ပါမယ်ထင်တယ်။ /Zနီးသယ်/ကတော့ အဲဒီလို ခဏခဏကြည့်ရတာကို မပျင်းဘူးလားမေးတယ်။ အခုအထိတော့မပျင်းသေးဘူး။ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်ကြည့်ဖို့လည်း အစီအစဉ်ရှိသေးတယ်။
There isahidden philosophy underneath .
AOD game ကို top ဖြစ်အောင်ဆော့နေတယ်ဆိုတော့ မိန်းမက နားမလည်နိုင်ဘူး။ ဘာမှလည်းမလုပ်ရတဲ့ screen ကို ထိုင်ကြည့်နေရတာဟာ game ဆော့နေတာမှမဟုတ်တာလို့ပြောတယ်။ ဒါကို အတူတူဆော့ကြတဲ့သူတွေပဲနားလည်မယ်။ Top 5% ကနေ Top 1% ရောက်တဲ့အထိ ဆော့သွားတာ (မိန်းမရဲ့စကားလုံးအရတော့ iphone ကသိုဏ်းရှူနေတာ)ဟာ အနုပညာမြောက်တယ်။ တဖြည်းဖြည်းချင်း တိုးတက်သွားတဲ့သဘော။ အရင်က ကိုယ်အင်အားနည်းနေတုန်းက လာလာနှိပ်စက်တဲ့အကောင်တွေ အခုလို မရှုမလှ ကျဆုံးနေတာကိုက အရသာမြောက်တာ။ နောက်ပိုင်း သိပ်နှေးလာတဲ့အခါ သေချင်ပါတယ်ဆိုတောင်မှမသေနိုင်တော့လို့ တစ်ပတ်လောက်ပစ်ထားရမလိုဖြစ်လာတယ်။
မွေးချင်တဲ့အကောင်ပလောင်တွေများလွန်းလို့ မယူခင်ကတည်းက ဘာအကောင်မှ မမွေးဖို့သတိအမြဲပေးဖို့ မိန်းမကို မှာထားရတယ်။ ငါးဆိုင်ရောက်ရင် ငါးဝယ်မိမလို ခဏခဏဖြစ်တယ်။ ငှက်ဆိုင်ရောက်ရင် ငှက်ဝယ်ချင်လာတယ်။ ခွေးဆိုင်ရောက်ရင်ခွေးမွေးကြရအောင်ဖြစ်လာပြန်ရော။ အမွေးစုတ်ဖွားကြောင်တွေကိုလည်းသဘောကျမိတယ်။ ဒါပေမယ့် အိမ်ကခွေးတွေ ဆုံးပြီးကတည်းက ဘာအကောင်မှ မမွေးတော့ဘူးလို့ ဆုံးဖြတ်ထားတယ်။ ဆုံးဖြတ်ထားပေမယ့် မြင်လိုက်ရင် အကောင်ပလောင်လေးတွေက သနားစရာ၊ မွေးချင်စရာတွေချည်းပဲ။ အသက်ကြီးလာရင်တော့ ခွေး ငါးကောင်လောက်မွေးမယ်လို့စိတ်ကူးတယ်။ အခုအထိ မွေးချင်တဲ့ခွေအမျိုးအစားကို စဉ်းစားနေတုန်းပဲ။ သုံးမျိုးကိုတော့စဉ်းစားပြီးပြီ။ အထီးအမ တစ်စုံစီမွေးမယ်ဆိုရင် ခြောက်ကောင်မွေးရမယ်။ အဲဒါကလည်းမဖြစ်သေးဘူး။ ငါးကောင်ပဲမွေးချင်ပြီး အထီးအမတစ်စုံစီဖြစ်ချင်တာဆိုတော့ ခွေး အမျိုးအစား နှစ်မျိုးပဲမွေးရမလိုဖြစ်နေတယ်။ နောက်ဆုံး ခွေးကြောက်တဲ့ မိန်းမကပဲ မမွေးနဲ့ရှုပ်တယ်ဆိုမှပဲ အဲဒီ စိမံကိန်းလည်း gameover သွားမယ်။
ဒါတောင် ကံကောင်းထောက်မပြီး တံဆိပ်ခေါင်းစုတာဝါသနာမပါလို့။ နည်းနည်းလေးစလိုက်ပြီး ပျင်းသွားလို့ရပ်ထားလိုက်လို့ ၀ါသနာတစ်ခုနည်းသွားတယ်။
ကြံကြံဖန်ဖန်ဝါသနာတွေလည်းရှိသေးတယ်။ နာရီကို ဂဏန်းတူတာလေးတွေ စောင့်ကြည့်တာတို့။ အစဉ်လိုက်ဖြစ်နေတာကို သဘောကျတာတို့ရှိသေးတယ်။ Digital နာရီပတ်တုန်းကဆို 12:34:56ကို ကြည့်ပြီးမှ အိပ်တာတို့ဘာတို့။ အဲဒီတော့ တစ်နေ့တစ်နေ့ကို မရိုးရဘူး။ 5:55:55 ဆိုရင် သဘောကျတယ်။ 555 ကြော်ငြာရိုက်တဲ့သူတောင်မှ အဲဒီလို အိုင်ဒီယာကို ယူသေးတယ်ဆိုတော့ သူ့မှာလည်း အဲဒိလိုဝါသနာရှိပုံရတယ်လို့တွေးမိတယ်။
နောက်ပြီးပျောက်သွားတဲ့ဝါသနာတစ်ခုက ဓာတ်ဆီမီးခြစ်လေးတွေစုထားတာ။ အဲဒါလည်း တစ်နှစ်လောက်ဝါသနာပါလိုက်သေးတယ်။ လှည့်ပြီးဖွင့်ရတဲ့ ဘောပင်တွေစုထားတာ အချောင်း လေးဆယ်လောက်အရောက်မှာ စုထားတဲ့တစ်ဘူးလုံးပျောက်သွားပြီး ၀ါသနာကို စွန့်လိုက်ရဖူးသေးတယ်။
ငါးမွေးတုန်းကတော့ Fighter ကို အရောင်စုံအောင်စုရင်းစုရင်း ပုလင်း ငါးဆယ်ကျော်သွားဖူးတယ်။ နောက်တစ်ခေါက်ကြတော့ Red cap တွေ စုထားတာ။ အမောက်လှလှပပနဲ့ red cap မြင်ရင် အခုအထိကို ဝယ်ချင်တုန်း။ ငါးမွေးတဲ့ဝါသနာကတော့ ဒီကိုမလာခင်အထိမွေးတုန်းပဲ။ အခုတောင် ရန်ကုန်အိမ်က ရေချိုးကန်ထဲမှာ အော်စကာအဖြူအကြီးကြီးတစ်ကောင်ရှိသေးတယ်။
နောက်ပြီး ၀ါသနာမဟုတ်တဲ့ အကျင့်တွေလည်းရှိသေးတယ်။ ရယ်စရာတော့ကောင်းတယ်။ ဥပမာ သစ်သီးနဲ့လုပ်ထားတဲ့ ရှောက်သီးဆေးပြားလို စားစရာတွေ Watson မှာရောင်းလေ့ရှိတယ်။ အဲဒါမျိုးကိုဆို ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ မကုန်မချင်းစားနေမိတယ်။ အစာအိမ်မကောင်းလို့ သိပ်များများမစားသင့်ဘူးဆိုတာသိပေမယ့် လစ်ရင်လစ်သလို စားနေမိတုန်းပဲ။ /Zနီးthe/ ကတော့ အဲဒါကို သဘောမကျဘူး။ ရှောက်သီးဆေးပြားကို ထမင်းလို မစားနဲ့လို့ မကြာခဏ အပြောခံထိတယ်။
I am sick and tired of traditional medicine powder. Of course, the same rule can be applied to the dangerous fish too.
နောက်တစ်ခုက မြန်မာဆေးအမှုန့်မသောက်နိုင်တာ။ အဲဒါလည်း ဘယ်လိုသင်သင်မတတ်ဘူး။ အရိုးပါတဲ့ငါးကိုစားရတာနဲ့ မြန်မာဆေးအမှုန့်သောက်ရတာဟာ ဒီဘဝမှာတော့ အခက်ဆုံးအလုပ်နှစ်ခုပဲ။ ဘယ်အချိန် စားစား၊ ဘယ်အချိန်သောက်သောက် ဒုက္ခရောက်တယ်။ သူကတော့ အဆင်ပြေပုံရတယ်။
Pumpkins are for Cinderella. But, not for us.
နောက်ထပ် အခုအထိ မစားတတ်တာက ရွှေဖရုံသီး။ ဘယ့်နှာကြီးမှန်းမသိဘူး။ အရသာကလည်း ချိုတွတွ။ ဒီတစ်ခုပဲ ဒို့နှစ်ယောက် တိုက်ဆိုင်တာ။ အဲဒီကနေ စပြီး သံယောဇဉ်ရှိသွားတာဖြစ်နိုင်တယ်။ (ဤ္မကားစကားချပ်တည်း။)
Roselle and Bamboo-shoots
ချဉ်ပေါင်နဲ့မျှစ်ချက်စားရင်တော့ အဆင်ပြေတယ်။ မိန်းမက မျှစ်ပဲစားတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်း ချဉ်ပေါင်ပဲစားတယ်။ ဟင်းရည်ချက်စားရင်လည်း မိန်းမက ဟင်းရည်ထဲက အရွက်တွေပဲစားတယ်။ ကျွန်တော်က အရည်သောက်ဟင်းက အဖတ်နည်းနည်းမှမစားဘူး။
Slippers in need are slippers in deed.
ခြေထောက်တွေက အမြဲတမ်း အေးနေတဲ့အတွက် ဖိနပ်စီးထားရတယ်။ မဟုတ်ရင် ကြမ်းပြင်ပေါ်ခြေထောက်ချထားရင် ခြေထောက်တွေကိုက်ခဲတယ်။ (ခြေထောက်တွေကို ကိုက်တာ ခဲတာမဟုတ်ဘူး။ ခြေထောက်တွေကိုက ကိုက်ခဲတာ။) မိန်းမကတော့ ဖိနပ်စီးဖို့ တော်တော်ပြောရတယ်။ Angry Birds ဖိနပ်လည်း ဝယ်လာပြီး စီးတာမတွေ့သေးဘူး။
No more Lemon, please!
သင်းပျံ့တဲ့ရနံ့တွေကို သဘောကျပေမယ့် လီမွန်နံ့ကိုမကြိုက်ဘူး။ မိန်းမကတော့ လီမွန်မှ လီမွန်။
Aircon Vs Anti-Aircon
နောက်တစ်ခုမကြိုက်တာက Aircon။ ဆူညံသံကြောင့် တံခါးကိုပိတ်ပြီးအိပ်ရင်သာ အဲကွန်းကို နည်းနည်းလေးဖွင့်ထားရတာကလွဲရင် အဲကွန်းအေးတာကို နည်းနည်းမှမကြိုက်ဘူး။ မွေးရာပါ အဲကွန်းပါတဲ့လူမျိုးဖြစ်လို့။ နွေရာသီမှာတောင် စောင်လေးနဲ့အိပ်တယ်။ မိန်းမကတော့ တေဇောဓာတ်များတယ်။ တခါတလေ ရေနွေကြမ်းသောက်ရင်းပြန်အေးသွားရင် သူ့လက်နဲ့ထိလိုက်ရင် ပြန်ပူလာမလားထင်ရတယ်။ အရင်ဘဝက ဆဟားရားဘက်ကဖြစ်နိုင်တယ်။ အခုထက်ထိ အပူရှိန်တွေထွက်နေတုန်း။ အဲဒီတော့ သူက အဲကွန်းဆို အေးမှ၊ အရင်အိမ်မှာတော့ စောင်နှစ်ထပ်နဲ့အိပ်ရတယ်။ အခုတော့ အိုကေသွားပြီ။ သဘာဝအေးမြတဲ့ နေရာမှာပဲနေတော့တယ်။ (East Coast ကသဲပြင်မှာ)
We are fusspots
ဇီဇာကြောင်တယ်ပေါ့ဗျာ။ ကျွန်တော်က အိပ်ရင် တောင်အရပ်ကို ခေါင်းထားပြီး အိပ်ချင်တယ်။ ငယ်ကတည်းကပဲ။ ဘာလို့လည်းဆိုတော့ တောင်နဲ့မြောက်အိပ်ရင် လူရဲ့ သံလိုက်စက်ကွင်းက အားပြည့်လွယ်တယ်ဆိုလို့။ (ရုပ်မြင်သံကြားအစီအစဉ်တစ်ခုမှာ fame က ဆရာဝန်ပြောသွားတာပဲ။)ကျန်တဲ့လူတွေနဲ့ အလိုက်သင့်နေပေမယ့် မိန်းမနဲ့ကတော့ အမြဲတမ်း ညှိရခက်တယ်။ ဒီတစ်ခါနေတဲ့အခန်းက ကုတင်ကို ကျွန်တော်နေချင်သလိုထားလို့ရတယ်။ ဒါပေမယ့် သူက အရှေ့အနောက်ထားလိုက်ရင် နေရာပိုကျယ်မယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ L ပုံစံကျယ်တာက တကယ်တော့ အလကားပဲဆိုပြီး သူ့ရဲ့ စတုရန်း ဥပဒေသကိုပြောတယ်။ အဲဒီတော့ နှစ်ယောက်သား ငြင်းလို့မပြီးတော့ဘူး။ ဒါနဲ့ယောက္ခမဆီကိုဖုန်းဆက်ပြီး မြန်မာ့အယူအရတော့ အရှေ့(သို့) တောင်ဘက်ကို ခေါင်းထားကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ကြမ်းနဲ့ ကန့်လန့်မဖြစ်တာပိုကောင်းတယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော့်ရဲ့ တောင်ဘက် ခေါင်းထားရေးအယူအဆကပိုပြီး လျော်ကန်နေတယ်။ အဲဒီင်္တော့ သူက တောင်ဘက်ကိုခေါင်းထားရင် ကုတင်ကို အရှေ့ခြမ်းကိုပဲကပ်မယ်လို့ပြောတယ်။အဲဒါမှ ပိုကျယ်သလိုဖြစ်မယ်လို့ပြောတယ်။ ပိုကျယ်သွားရင်လည်း ကုတင်ခြေရင်းမှာ ၀ိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဆော့မှာမှမဟုတ်တာဆိုလည်းမရဘူး။ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံး တောင်ဘက်ခေါင်းထားပြီး အရှေ့ဘက်ကပ်ပြီး ကုတင်ကို ဆင်ခိုင်းလိုက်တယ်။ အဲဒီတော့မှ ပြဿနာက ကုတင်ကို ဖွင့်တဲ့အခြမ်းက နံရံနဲ့ကပ်နေတာ့ အဆင်မပြေဘူး။ ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ သူက အနောက်ဘက်ကို လုံးလုံးမထားနိုင်ဘူးဆိုတာနဲ့ ကြမ်းကန့်လန့်နဲ့ အရှေ့ဘက် ခေါင်းထားပြီး ဆင်လိုက်ရတယ်။ ကုတင်ဆင်တဲ့သူလည်း phone က သံလိုက်အိမ်မြောင် တကြည့်ကြည့်နဲ့ သူတို့ကို ဆင်ခိုင်းနေတဲ့ ကျွန်တော်တို့ကို ဖုန်းရွှေမာစတာတွေလို့ထင်သွားပုံရတယ်။
ဘုရားစင်ကို အရှေ့အရပ်တည့်တည့်ကျအောင် ၂၁ ဒီဂရီစောင်းဖို့ကိုကြတော့ သူမ ကလက်မခံပြန်ဘူး။
Symmetrical Vs Chaotic
/Zနီးသယ်/ နဲ့အဓိက ပြဿနာက သူက အင်မတန်မှ symmetrical ဖြစ်ချင်တာ။ အဲဒီတော့ ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေဘူး။ ကျွန်တော်က ခေါက်ချိုးညီနေတာတွေဆို သစ်ရွက်တွေမှာပဲ အဆင်ပြေတယ်လို့ထင်တယ်။ ပစ္စည်းသုံးခုကို တန်းစီလိုက်ရင် အကွာအဝေးအတူတူမှာထားလိုက်ရင် သူတို့မှာ rule တစ်ခု discipline တစ်ခု အောက်ကို ရောက်အောင်လုပ်လိုက်သလိုပဲ။ ဘာကိုသတိရလဲဆိုရင် ဗိုလ်လောင်းတွေ လမ်းလျှောက်သလို၊ ကုလားတွေ နှုတ်ခမ်းမွှေး တစ်ပုံစံတည်းထားသလို၊ ဆံပင်ကို ဘီးနဲ့ အကြောင်းလိုက်ဖော်ပြီး ဘယ်ဆံပင်နဲ့ ညာဆံပင် အချောင်းရေတွက်ပြီးခွဲထားသလိုကြီး။ အဲဒါဟာ သဘာဝမကျဘူးလို့ခံစားရတယ်။ သစ်ပင်တွေတောင် တစ်ပင်နဲ့တစ်ပင်ပုံစံမတူဘူး။ အကိုင်းထွက်တာ၊ မြင့်မားတာတွေ မတူဘူး။ ကမ္ဘာကြီးကို တည်ဆောက်ထားတာကိုက အတိအကျကြီးမဟုတ်ဘူး။ အဆင်ပြေသလိုလေးတွေပဲ။ ဘုရားပန်းအိုးမှာဆိုရင်လည်း /Zနီးသယ်/ က ရောထွေးပြီး ဘယ်တော့မှမထိုးဘူး။ ဂန္ဓာမာပန်းသည် နှင်းဆီပန်းနဲ့ ရောထိုးစရာမဟုတ်ဘူးလို့ သူက ယူဆတယ်။ ကျွန်တော့်ကို ဘုရားပန်းဝယ်ခိုင်းလို့ကတော့ စိတ်ထဲပေါ်တဲ့အရောင်တွေ သုံးလေးငါးမျိုးဝယ်ဖြစ်တယ်။ သိပ်ပြီးတော့ စည်းစနစ်ထဲမှာ မြင်ရတဲ့ အရောင်တွေ ပုံသဏ္ဍာန်တွေကို မကြိုက်ဘူး။ သဘာဝဆန်ဆန်လေးပဲကြိုက်တယ်။
မီးပူတိုက်ရင် ကျွန်တော်က ခါးလောက်အထိပဲတိုက်တယ်။ ပျင်းလို့။ ဘောင်းဘီထဲ ထည့်ဝတ်မယ့်အပိုင်းကို တိုက်စရာမလိုဘူးလို့ယူဆတယ်။ အဲဒါကိုလည်း /Zနီးသယ်/ ကသဘောမတူဘူး။ အဲဒီလိုမျိုးတွေလည်းအများကြီးပဲမတူဘူး။
I want to make my blanket fly
စောင်ကိုခေါက်ရင် standard ခေါက်ရိုးကနေလွဲချော်ပြီး သေးသေးလေးခေါက်ထားရင် သူ့ဘာသာသူပြန်ခေါက်တယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ဖြစ်နိုင်ရင် စောင်ကိုတောင် မိုးပျံပူဖောင်း နှစ်လုံးမှာ ကလစ်နဲ့ညှပ်ပြီး အခန်းထဲမှာ လှမ်းချင်တာ။ ခေါက်ရတာ သိပ်ပျင်းဖို့ကောင်းတယ်။ same old thing ကို ထပ်တလဲလဲကြော့နေရတာ။ အဲဒါတွေကြောင့်လည်း ကမ္ဘာကြီးဟာ ပျင်းစရာကောင်းသထက်ကောင်းလာတာ။
Why buildings are the same lame design, the awful right angels in every corners?
ဟိုတစ်နေ့က အိမ်ပြန်ရင်း တိုက်တွေကို ဘာလို့ လေးထောင့်တုံးကြီးတွေပဲလုပ်ထားတာလဲစဉ်းစားဖြစ်တယ်။ မာရီယိုထဲက မှိုပွင့်လိုမျိုး၊ မီးရထားခေါင်းတွဲပုံစံမျိုးတွေ ဘာလို့မဆောက်ကြတာလဲ။ အဲဒါတွေကို ကလေးဆန်တယ်ထင်လို့လား။ အကုန်လုံးကို ဒီအတိုင်းဆောက်မယ်ဆိုတဲ့ architect ဟာ နည်းနည်းမှ creative မဖြစ်တဲ့သူဖြစ်မယ်။ အဲဒီလိုလူတွေများလာရင် သီအိုရီတွေ၊ ဖွင့်ဆိုချက်တွေမှာ တိုက်တွေဟာ လေးထောင့်ရှိရပြီး အခန်းတွေဟာ စတုဂံပုံကျယ်ဝန်းရမယ်ဆိုတာမျိုးတွေတောင်ဖြစ်လာမယ်။
Though we have right to choose
ပုဆိုးကိုပဲကြည့်။ ပုဆိုးမှာ ရွေးချယ်စရာနှစ်ခုရှိတယ်။ ဝတ်မယ်ဆိုရင် ပုဆိုးထဲဝင်လိုက်လို့လည်းရတယ်။ ကိုယ်က ပုဆိုးထဲကို နင်းပြီး ဝင်လိုက်တာ။ နောက်တစ်ခုက ခေါင်းက စွပ်ချလိုက်တာ။ သတိထားကြည့်ရင် ပုဆိုးဝတ်တာမှာကို တမျိုးတည်း၊ ဝတ်နေကြအတိုင်းပဲ ဝတ်နေကြရင် အတော်လေးပျင်းစရာကောင်းတယ်။
chaos ထဲမှာ ရှိတဲ့ order ကို သဘောကျတယ်။ အန်စာတုံးခေါက်တာဟာ random number ကျတယ်ဆိုပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ သူ့ရဲ့ order ရှိလာတဲ့အထိ ခေါက်ရင် သူဟာ random မဟုတ်တော့ဘူး။ ခဏလေး နေရတဲ့အခါ ဘဝဟာ ဖြစ်ချင်သလိုဖြစ်နေတယ်ထင်ရပေမယ့် သံသရာကိုပါ ထည့်ပြီး စဉ်းစားကြည့်ရင်တော့ သူ့မှာလည်း order ရှိတယ်ဆိုတာတွေ့နိုင်တယ်။
We are husband and wife. Sigh (oops) Cheers !!!!
The gardener in Friday mood. I start feeling 2day is Friday :). 2morrow will be Frida-ier.
Labels: daily lif3, happy days
ကဗျာတစ်ပုဒ်ကို သတိရတယ်။ လူဖြစ်ရတာကောင်းတယ်။ နေမျိုးရေးတာပါ။ ပထမပိုဒ်လေးကိုပဲရွတ်ကြည့်မိတယ်။
လူဖြစ်ရတာဟာ ဒုက္ခဘုံထဲ ရောက်လာတာပဲတဲ့
မနေ့က ရုံးမှာ Toilet ၀င်ရင်း သန့်ရှင်းရေး အလုပ်သမားတစ်ယောက် အိမ်သာကြွေခွက်ကို ပယ်ပယ်နယ်နယ်တိုက်ချွတ်နေတာတွေ့တယ်။ ၀ဖိုင့်ဖိုင့် ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကို ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာထိုင်ချရင်း အိမ်သာဆေးနေတာ။ သူ့ကို ကြည့်လိုက်တော့ သာမန်ဉာဏ်ရည် ပြည့်မီသူမျိုးမဟုတ်ဘူး။
အဲဒီတော့ တွေးမိတယ်။ သူ့ကို ဒီလိုအလုပ်တွေ ခိုင်းတာဟာသင့်တော်ရဲ့လားဆိုတာကိုတွေးဖြစ်တယ်။ အရင်တုန်းက နေခဲ့ဖူးတဲ့ အိမ်တစ်အိမ်က အိမ်ရှင် အန်တီက အဲဒီလှိုSpecial needs လိုနေတဲ့ကလေးတွေကို လေ့ကျင့်ပေးတဲ့ကျောင်းမှာ လုပ်တဲ့အတွက် ဒါကိုလည်း နည်းနည်းမေးကြည့်ဖူးတယ်။ စင်ကာပူဟာ နိုင်ငံသေးပေမယ့် Special Needs လိုတဲ့ကလေးတွေကြတော့မနည်းလှဘူး။ အဲဒီလို လေ့ကျင့်တဲ့ကျောင်းတွေမှာ ဘာကို လေ့ကျင့်ပေးလဲဆိုတော့ သူ့ဘာသာသူ ရပ်တည်တတ်အောင်၊ သူလုပ်နိုင်တာတစ်ခုခုသင်ပေးတာမျိုးတွေလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးရတယ်။ တစ်ချို့လည်းလုံးဝမတတ်ဘူး။ တစ်ချို့လည်း တတ်မြောက်လာတယ်။ အဲဒိလိုလူတွေကို ဟော့ကာစင်န်တာတွေနဲ့ သန့်ရှင်းရေး လုပ်သားတွေမှာတွေ့ရတတ်တယ်။ အဲဒီလောက်လုပ်နိုင်ပြီဆိုရင်ကို သူတို့ဟာ လေ့ကျင့်ရေးကျောင်းတွေရဲ့ အောင်မြင်မှုဖြစ်နေပြီ။ သူတို့ဟာ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးမဟုတ်တော့ဘူး။ သိပ်အများကြီးမသိပေမယ့်၊ သူ့ဘာသာသူ ရပ်တည် အသက်မွေးနိုင်ပြီလို့ဆိုနိုင်တယ်။
အိမ်သာဆေးတဲ့အလုပ်ကိုပဲကြည့်။ သာမန်လူတစ်ယောက်သာဆို သူ့ထက် ပိုပြီး smart ကျတဲ့နည်းနဲ့ သက်သက်သာသာဆေးနိုင်မယ်။ သူ့အတွက်တော့ မခက်ခဲပေမယ့် မသက်သာလှဘူး။ လူ့အဖွဲ့အစည်းဟာ Special Needs လိုနေတဲ့သူတွေကို အိမ်သာဆေးခိုင်းနေတာကို မတရားဘူးလို့ခံစားရတယ်။ သူလုပ်နိုင်သလောက် သာမန် ကိစ္စတွေပဲခိုင်းသင့်တယ်လို့ထင်တယ်။ သန့်ရှင်းရေးဆိုလည်း သူလုပ်နိုင်လောက်တဲ့ mop တိုက်တာ အမှိုက်သိမ်းတာလောက်ဆို တော်ရောပေါ့။ ကျန်တာတွေကို ပိုပြီးလုပ်နိုင်တဲ့သူတွေနဲ့တွဲလုပ်ခိုင်းလည်းရလောက်ပါတယ်။ အခုဟာက ဘာနဲ့တူသလဲဆိုရင် သိပ်မသိတဲ့ ကလေးတွေကို လူကြီးတွေက ညာခိုင်းနေသလိုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲခံစားရတယ်။
စင်ကာပူဟာ နိုင်ငံဟာ စီးပွားရေးအရ အောင်မြင်ပေမယ့် လူတွေ စိတ်ချမ်းသာဖို့နဲ့ လိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့လူတွေကို ဖေးမကူညီဖို့တွေမှာ တော်တော်လေးအားနည်းပါသေးတယ်။
မြန်မာမျက်လုံးနဲ့ကြည့်ရင်တော့ လူကြီးတွေဘ၀ဟာလည်း အထီးကျန်လွန်းတယ်။ ဘေးအိမ်ကလူ ဘယ်သူမှန်းမသိကြတဲ့ နေရာမျိုးမှာ ကြီးပြင်းလာမယ့် ကလေးတွေရဲ့အတွေးအခေါ်နဲ့ အပြုအမူတွေကလည်း ကျွန်တော်တို့ငယ်တုန်းကလို တစ်ရပ်ကွက်လုံးနဲ့သိတဲ့ လူနေမှုပုံစံမှာ ကြီးပြင်းလာတဲ့သူနဲ့ကွာခြားမှာအမှန်ပဲ။
အခုကိစ္စဟာ အိမ်သာဆေးတဲ့ လူတစ်ယောက်အကြောင်းလည်း ဖြစ်သလို နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံရဲ့ နိုင်ငံသားတစ်ယောက်အပေါ် တာဝန်ယူမှု အကြောင်းလည်းဖြစ်တယ်။ အသေးအဖွဲကိစ္စလို့သတ်မှတ်လို့ရသလို၊ နိုင်ငံရဲ့ မပြည့်ဝမှုသာဓကလည်းဖြစ်တယ်။ စင်ကာပူဟာ ငွေရေးကြေးရေးအရ အောင်မြင်မှုနဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှုကို ရောထွေးနေသေးတဲ့ နိုင်ငံငယ်လေးတစ်ခုပဲဆိုတာ ကြာလေ သဘောပေါက်လေ ဖြစ်နေမိတယ်။
နိုင်ငံသားတွေ အေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်ပြီး စိတ်ချမ်းချမ်းသာသာ အလုပ်လုပ်ရင်း ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် အသက်အရွယ်ကြီးရင့်လာနိုင်တဲ့ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်လာဖို့အတွက်တော့ စင်ကာပူဟာ အများကြီးသင်ယူစရာရှိပါသေးတယ်။ ငွေကြေးနဲ့ဝယ်လို့မရတဲ့ စိတ်ချမ်းသာမှု ဆိုတာကို သူတို့သဘောပေါက်လာတဲ့တစ်နေ့မှာ ပရဟိတ လုပ်ငန်းတွေ ဒီထက် အားကောင်းလာပြီး ပိုပြီးနေပျော်တဲ့ နိုင်ငံဖြစ်လာမယ်လို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။
ယဉ်ကျေးပါ၊ သင်ယူပါ၊ ရိုးဖြောင့်ပါ
လူတစ်ယောက်ရဲ့ နောက်ဆုံးဝါကျကို ငါဖတ်ခဲ့ရတယ်
ငါပိုသိလာတဲ့အချိန်မှာ ငါဟာ ၀ံပုလွေတစ်ကောင်ဖြစ်နေခဲ့ပြီကွဲ့။
လူဖြစ်ရတာကောင်းပါတယ်။ ၀ံပုလွေသံဝေဂနဲ့ လူဖြစ်ရတာ ကောင်းနေတာမျိုးကြတော့မကောင်းဘူး။ လူသားအစစ်ဟာ လူ့တန်ဖိုးအစစ်ကို အသိအမှတ်ပြုပြီး လူကိုလူလို့မြင်ဖို့လိုပါတယ်။ လူဆိုတာ company အတွက်ထွင်ထားတဲ့ စက်ရုပ်မဟုတ်သလို၊ အခွန်ထမ်း အစေခံတွေလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ လူအချင်းချင်း ဖျံကျတဲ့ ကိုယ်ချင်းမစာနာတတ်သူတွေလည်းမဖြစ်ရပါဘူး။ လူသားအစစ်ဟာ လူသားဆန်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်ကို လိုလားပါတယ်။ နေမ၀င်ခင် အိမ်ပြန်ချင်ပါတယ်။ မိသားစုဘ၀ကို ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ ကိုယ်ပိုင်ဘ၀မှာနေထိုင်လိုပါတယ်။ လူသားအစစ်ဟာ အပြုံးအစစ်ကိုပြုံးပါတယ်။ တစ်ယောက်ယောက်ကို ကြည့်ရင် လှေကားထစ်လို့မမြင်ပါဘူး။ လူသား မိတ်ဆွေတစ်ယောက်လို့ပဲမြင်တယ်။ လူသားအစစ်ဟာ ပရဟိတကို တန်ဖိုးထားပါတယ်။ လူသားအစစ်ဟာ ကလေးတွေရဲ့ ငိုကြွေးသံတွေနဲ့ လူကြီးတွေရဲ့ ရှိုက်သံကိုကြားပါတယ်။ လူသားအစစ်ဟာ ငွေကြေးအကြောင်းကို မေ့ထားလိုက်နိုင်တယ်။ (စကားပြောတိုင်း ငွေအကြောင်းမပါဘူး) လူသားအစစ်ဟာ ဘ၀ကို နေသွားပါတယ်။ (ဘ၀ကို မေ့လျော့ပြီး မျောပါမသွားဘူး။) လူသားအစစ်မှာ ကိုယ်ပိုင်အချိန် လိုအပ်ပါတယ်။ ဘ၀မှာအောင်မြင်မှုကို စိတ်ချမ်းသာမှုနဲ့ တိုင်းတာတဲ့ခေတ်တစ်ခေတ်ရောက်တဲ့အခါ လူသားအစစ်တွေဟာ ဘ၀မှာ အောင်မြင်သူတွေ ဖြစ်လာကြလိမ့်မယ်။ ။
လောလောဆယ်တော့ စင်ကာပူမှာ သစ်ပင်ခုတ်ပြိုင်ပွဲလုပ်နေသလားထင်ရလောက်အောင် ခုတ်တယ်ခင်ဗျ၊ ခုတ်တယ်ခင်ဗျ ... ခုတ်နေပါတယ်ခင်ဗျာ။